News, Views, Vision, True picture of America and the world - Voice of Washington. Contact: Voiceofwashington@gmail.com
आफन्तजन, नाता सम्बन्ध, आफ्नो पन मात्र होइन हामी आफै पनि सकिने र सकाउने बाटोमा छौँ !
- रामप्रसाद खनाल अमेरिका बसेको पनि १२ वर्ष नाघेछ । अमेरिकामा होस वा नेपाल बाहिर अन्य कुनै पनि देशमा होस वा नेपालमै पनि किन नहोस्, म नजिक बाट नियाल्ने प्रयास गर्छु - नेपालीहरूमा यति बिघ्न स्वार्थी पन, कठोर मनको विकास हुँदै गएको छ कि यदि यही गतिमा जाने हो भने अबका केही वर्षमा छोराछोरीले आफ्नै बाउ आमा चिन्न छाड्ने छन् । चिनिहाले जस्तो अभिनय गरे पनि उनीहरूको आत्मामा बाउ आमा प्रतिको माया, अन्तर सम्बन्ध सबै सिसा जस्तै झर्याम झुरुम टुटेको हुने छ । आजले भोलि देखाउँछ । यो मैले नजिकबाट नियाली रहेको कहाली लाग्दो भोलिको तस्बिर हो । श्रीमानलाई श्रीमती, श्रीमतीलाई श्रीमान् भए पुग्ने, आफूले जन्माएको छोरो र बुहारी, छोरी र ज्वाइँ मात्र आफ्ना । अरू सबै पराया जस्तो देखाउने चलनको विकास नै हाम्रो मानव सभ्यता, मानवीय धर्म, नैतिकता र आदर्शको विनाश उन्मुख बाटो हो । तर आफ्ना छोरा बुहारी र छोरी ज्वाँईलाई मात्र आफ्नो देख्दै गरेका बाउ आमा यो पनि भुलिसकेका छन् कि हाम्रा छोरा बुहारी, छोरी ज्वाँईबाट पनि हामीले सोंचे जस्तै माया पाइरहेका छौँ त ? भनेर । छोरो बुहारीको भैसकेको हुन्छ । उ बुहारीको रोबर्ट बनेको हुन्छ
विदेशमा बस्ने हामी नेपालीहरू यता आफ्नो चिन्ता त छँदै छ तर आफ्नो भन्दा बढी चिन्ता नेपालको छ !
- रामप्रसाद खनाल अलिकति रुघा लागे जस्तो भएको छ, टाउको दुख्ने र अनइजी महसुस पनि भएको छ । म आफै पनि तीन दिन देखी घरमै आइसोलेशनमा बसिरहेको छु । हाल म बसिरहेको देश अमेरिका चाइनाबाट शुरु भएको कोरोना भाइरसको चपेटामा परिसकेको छ । यी पङ्ती लेख्दा सम्म अर्थात् मार्च २३ तारिख बिहान ११ बजे सम्मको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ४५९ जना भन्दा बढी अमेरिकनहरूको "रामनाम सत्य" भैसकेको छ भने ३५,१७९ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भैसकेको छ । मृत्यु हुने र सङ्क्रमितको सङ्ख्या मिनेट मिनेटमा थपिरहेको देख्दा शङ्कै शङ्का र त्रासले होला सन २०२० नै मेरो अन्तिम वर्ष हुने त होइन भनेर मनमा डर पनि लागिरहेको अवस्थामा छ । मनमा डर पनि किन नलागोस् - संसार भर १५४१९ भन्दा बढीले जिब्रो टोकिसकेका छन् भने ३५३७५९ भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छन् । जति सुकै डराउन्न, आतङ्कित हुन्न भन्दै अरूलाई सान्त्वना प्रदान गर्दै गरे पनि आफ्नै मन भित्रै कता कता कथामा सुनेको यमराज साँच्चै कस्सिएर हामीहरूलाई लिन आएकै त होइन ? जस्तो पनि मनमा उत्पन्न भइरहेको छ । मै हुँ भन्ने देशहरू, संसारका सर्बशक्तिमानहरुको ओठ ता